ဂျပန်မှာဖြန့်မယ့် တတိယမြောက် မီနီအယ်လ်ဘမ်အတွက် ရေဆေးအညိုရောင် ဒီဇိုင်းနဲ့ ကာဗာဓာတ်ပုံ ထွက်ရှိလာတဲ့ GOT7
"'ခရီးသွားကောက်ကြောင်း' က လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ရှိနေတဲ့ ကြားထဲကနေ သွားရတဲ့ခရီးစဉ်ပါ" ဘုဏ်းသိုက်
''လုံးဝ အချစ်သက်သက် ဇာတ်လမ်းမျိုးကို ရိုက်ချင်လို့ Now & Ever ကို ရိုက်မှာပါ'' ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီးနားခီ
လျှော်ဖြူ အစေးဝယ် ပွဲစားများ လျှော်ဖြူ စိုက်ပျိုးမှုများသည့် ပခုက္ကူနှင့် ညောင်ဦးမြို့သို့ လာရောက် ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်း
ဗန်းမော်-နဘား ဓာတ်အားလိုင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် နစ်နာခဲ့ရသည့် တောင်သူများအတွက် နစ်နာကြေးငွေကျပ် ၇၇၁ သိန်းကျော် ပေးအပ်
ကျယ်ဂေါင်နယ်စပ်ဂိတ်၌ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေသည့် ကန်တော့ဗန်းရွက် မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဓာတ်ပုံရိုက်သူများပြားနေ၍ ဝင်ငွေကောင်းနေ
အိန္ဒိယမြို့တော် နယူးဒေလီတွင် မျောက်များ သောင်းကျန်းနေ
လူငယ်ကစားသမား ဖိုဒန်ကို မန်စီးတီး သက်တမ်းတိုး
အီတလီသို့ လာရောက်ကစားရန် မက်ဆီအား စီရော်နယ်ဒို တိုက်တွန်း
ဆိုးလ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ တောင်ကိုရီးယားကေပေါ့ပ်ဂီတလောကမှ နာမည် ကျော်အမျိုးသားဂီတအဖွဲ့ GOT7 သည် ၎င်းတို့၏ ဂျပန် နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိမည့် တတိယမြောက်မီနီအယ်လ်ဘမ် "I Won't Let You Go" အတွက် ရေဆေးအညိုရောင်ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသော ကာဗာဓာတ်ပုံငါးပုံထွက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု all k pop သတင်းအရ သိရသည်။
IN: Entertainment BY: ထက်ထက်အောင် 12 Dec, 2018
'ခရီးသွားကောက်ကြောင်း' ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ဒါရိုက်တာ/ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားသည့် ဘုဏ်းသိုက်နှင့်တွေ့ဆုံကာ ယခုလိုပဲ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မေး။ ။ ''ခရီးသွားကောက်ကြောင်း'' ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးဖြစ် တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အရင်ဦးဆုံး ပြောပြပေးပါဦး။ ဖြေ။ ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ဖို့အတွက်ကို ပရိုဂျူဆာဖြစ်တဲ့ မအိက ကျွန်တော့်ကို ပါဝင်ပေးဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲသွားရောက် ရိုက်ကူးမယ့်နေရာတွေ ရိုက်မယ့်ပုံစံတွေကို ကျွန် တော့်ဘက်ကနေပြီးတော့ သေသေချာချာ လေး မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ပ...
IN: Entertainment BY: NN 12 Dec, 2018
IN: Sport BY: KKW 12 Dec, 2018
စပါးနောက်ခံလူ အဲလ်ဒါဝီရယ်ကို ခေါ်ယူရန် မော်ရင်ဟိုခွင့် ပြုချက်ရရှိထား၊ ယူအီးအက်ဖ်အေ၏ ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် မန်ယူမှ ပေါ့ဘာ တစ်ဦးတည်း ပါဝင်
ဦးသန့် အရေးအခင်း အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပ
IN: Others BY: SLHK/NNKT 12 Dec, 2018
Web TV Programs
Flower News Journal (13-8)
ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၁၃)၊ အမှတ်(၆)
ထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ် ချခံထားရသည့် ကချင်လူငယ် သုံးဦးကို ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရန် မြစ်ကြီးနားတွင် လူ ၃ဝဝဝ ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
IN: Political BY: HWA 12 Dec, 2018
တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ငွေအတုများကို ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် အပ်နှံခြင်း မှန်ကန်ပါက မနော်သော့သွဲ့ထူးကို ဖမ်းဆီးထားခြင်းမှာ မတရား၊ တိုင်ကြားလာပါက ကူညီရန်အသင့်ဟု လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဆို
IN: Political BY: M Bwe 12 Dec, 2018
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက် ထရန့်က ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်ကို ခန့်အပ်
အဖမ်းခံထားရသော ဟွာဝေး ဘဏ္ဍာရေး အရာရှိချုပ်က အာမခံပေးရန် တောင်းဆို
စစ်ကိုင်းတိုင်း လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို ဥပဒေပညာရှင်များ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လွှတ်တော်တင်မည်
ဆန္ဒပြသူ ၁ဝ ဦးကို တရုတ် အစိုးရက ဖမ်းဆီး
မာန်အောင်ကျွန်း၌ ငါးဖမ်းလှေတစ်စင်း ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ရေစိမ့်ဝင်နစ်မြုပ်ပြီး ရေလုပ်သားငါးဦး သေဆုံး
မာန်အောင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်ကျွန်းတွင် သံတွဲမြို့နယ်မှ ငါးဖမ်းလှေတစ်စင်း ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ရေစိမ့်ဝင်နစ်မြုပ်၍ ရေလုပ်သားငါးဦး သေဆုံးသွား ကြောင်း သံတွဲမြို့နယ် ငပလီမြို့ ဂျိတ္တောရဲတပ်ဖွ...
IN: Regional BY: GC 12 Dec, 2018
ပုဂံသရပါဟိုတယ် အလုပ်သမား သပိတ်စခန်း ညဉ့်သန်းခေါင်ယံကျော် အချိန်တွင် ဖျက်သိမ်းခံရ
တောင်ကုတ်ဈေးပတ်လမ်း ဂိတ်ထိုးရန်နေရာရရေး ဆိုက်ကားသမား ၁ဝဝ ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီ ဥပဒေကြမ်းပါ ပုဒ်မ ၁၅(စ) ပယ်ဖျက်ပေးရေး မုံရွာတိုင်းရင်းဆေးရုံ ဆရာဝန်များ တောင်းဆို
သဘာဝသစ်တောများ၊ ချောင်းမြောင်းများ ပျက်စီးနိုင်သည့်အတွက် ပုံညာတောင်၌ ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရန် ခွင့်ပြုမည်မဟုတ် ဟုဆို
ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရိဒ်ရေကန်သို့ အပန်းဖြေခရီး လာရောက် လည်ပတ်သူ များပြားလာ
IN: Business BY: KH 12 Dec, 2018
IN: Business BY: MTH 12 Dec, 2018
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လျာထားချက်အောက် လျော့နည်း
ဗဟိုဘဏ်မှ လွန်ခဲ့သည့် ရက်အတွင်း ဒေါ်လာသန်း ၃ဝ ကျော် ဝယ်ယူခြင်းသည် ဘဏ်များ အကျိုးရှိအောင် တမင်တကာ လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက် လုံးဝမှန်ကန်မှု မရှိဟု ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌငြင်းဆို
မလေးရှားနှင့် ထိုင်းတို့မှ ကွမ်းသီးများကို မြဝတီ-ရန်ကုန်လမ်းမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် တင်ပို့ရာတွင် အခွန်အခများ ကင်းလွတ်နိုင်ရန် ကရင်ပြည်နယ်ထွက် ကွမ်းသီးဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်မျိုးစုံဖြင့် တင်ပို့လျက်ရှိနေဟုဆို
မန်စီးတီးအသင်းသည် ဒေါ့မွန်အပါအဝင် ပြိုင်ဘက်အသင်းများက ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေသော လူငယ်ကစားသမားဖိုဒန်ကို စာချုပ်သစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် အသင်းတွင်ဆက်ရိ...
ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်များ၏ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အပေါ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ စတာလင်း တိုင်ကြား
ကိုပါလီဘာတေးဒိုးစ် ဗိုလ်လုပွဲတွင် အချိန်ပို သွင်းဂိုးများဖြင့် ရေးဗားပလိတ်အသင်း ဗိုလ်စွဲ
IN: World News BY: M Bwe 12 Dec, 2018
အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ တိုးပေး၊ အခွန်သက်သာခွင့်ပေးမည်ဟု 'အဝါရောင် ကျည်ကာ'ဆန္ဒပြသမားတို့ကို ပြင်သစ် သမ္မတပြော
အိန္ဒိယ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်သမား သုံးဦးသေဆုံး
အာဏာရ ပါတီအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းစေရေး မဟာသီယာ မှာကြား
Huawei နှင့် ZTE ကုမ္ပဏီတို့မှ ပစ္စည်းများ မဝယ်ယူရန် ဂျပန်အစိုးရ ဆုံးဖြတ်
ပြင်သစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု ရက်သတ္တပတ် လေးပတ်အတွင်း ရောက်ရှိလာ
ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ရန် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို စွပ်စွဲချက်အဖြစ် အမေရိကန်က အသုံးပြုနေကြောင်း ရုရှား ဥပဒေပြုအမတ်ပြော
ဂျာမနီ CDU ပါတီခေါင်းဆောင် မာကယ်၏နေရာကို ခေါင်းဆောင်သစ် ခရမ့်ခါရင်ဘေယာ ဆက်ခံ
အီတလီညကလပ်တစ်ခုအတွင်း ပွဲလန့်ပြီး လူအချင်းချင်းနင်းမိ၊ ခြောက်ဦးသေဆုံး၊ ဒါဇင်များစွာ ဒဏ်ရာရရှိ
ကမ္ဘာမှမမြင်ရသော လအမှောင်ဘက်ခြမ်းကို လေ့လာရန် တရုတ်အာကာသယာဉ် လွှတ်တင်
''သုသုကို လာကမ်းလှမ်းတဲ့ ဇာတ်ကောင် စရိုက်အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ မှတ်ယူပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နာနာခိုင်းတယ်'' ပိုင်ဖြိုးသု
သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် အရေးပေါ် အခြေအနေမှ လွတ်မြောက်သွားခြင်းကြောင့် ဆေးရုံက ဆင်းရတော့မည်
ရွှေကူမေနှင်း ------------------- ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းက နိုဗယ်လ်- မြန်မာစာပေပွဲတော်ကို အမျိုး...
IN: Articles BY: ရွှေကူမေနှင်း 19 Oct, 2018
မှူးအိမ်ဇင် ''ပျင်းသောသူ အတတ်ပညာမရနိုင်အတတ်ပညာမရှိသောသူ ဥစ္စာမရနိုင်ဥစ္စာမရှိသောသူ မိတ်ဆွေမရနိုင်မိတ်...
IN: Articles BY: မှူးအိမ်ဇင် 19 Oct, 2018
ရွှေ ကူ မေ နှင်း မဟာဂီတမှာ ဂီတဖန်တီးမှုပြုလုပ်ရခြင်း အကြောင်းများရှိသလို ခေတ်ပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ ကာလပေါ်အရပ်...
IN: Articles BY: ရွှေ ကူ မေ နှင်း 11 Oct, 2018
မိချမ်းဝေ ********** တကယ်တော့ ကျွန်မသည် ခွေးချစ်တတ်သူတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ အိမ်မွေး (ဘိုခွေး)များကို မချစ...
IN: Articles BY: မိချမ်းဝေ 09 Oct, 2018
ဒေါက်တာလွင်သန့် ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ သုတ်သုတ်လုပ်၊ သုတ်သုတ်သွား၊ သုတ်သုတ်စားကာလမှာ လူသားတို့အနေဖြင့် စိတ...
IN: Articles BY: ဒေါက်တာလွင်သန့် 03 Oct, 2018
ဒီမိုကရေစီတူဒေး ဤရက်ပိုင်းတွေမှာ မကြီးကျယ်တစ်ယောက် အကြီးအကျယ် စိတ်ညစ်နေသည်။ စိတ်ညစ်ရသည့် အကြော...
IN: Articles BY: ဒီမိုတူဒေးနယူးစ် 02 Oct, 2018
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အီ ကွေတာအနီး အိန္ဒိယသ...
IN: Life BY: AA 12 Dec, 2018
ဘန်ကောက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ထိုင်းအစိုးရပိုင် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (Egat) က အမျိုးသားဓာ...
IN: Life BY: M Bwe 12 Dec, 2018
ကင်ဘာရာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားသော်လည်း စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆော...
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ မန္တလေးဧည့်လမ်းညွှန်အသင်း၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များမှ စေတနာနှင့် ပရဟိတစိတ်ကိုအခြေခံ၍ ဒုတိယ...
IN: Life BY: DW 11 Dec, 2018
စစ်ကိုင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ စစ်ကိုင်း မြို့ ရာဇမဏိစူဠာကောင်းမှုတော် စေတီတော်အား အဖြူရောင်ဆေး သင်္ကန်းကပ်လှူမ...
ချာလိုတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ခြမ်း ပြည်နယ်အချို့တွင် ပြင်းထန်သော နှင်းမုန...
IN: Life BY: M Bwe 11 Dec, 2018
ပြည်ထောင်စု ကျောက်တိုင်ကွင်းအတွင်း ပင်လုံပြတိုက် တည်ဆောက်ရန် မရှိသေး
IN: Others BY: MO 12 Dec, 2018
IN: Others BY: TTMT 12 Dec, 2018
ပေါင်မြို့မဈေးတွင် မြန်မာ၌သာတွေ့ရသည့် လိပ်အပါအဝင် ရေပျော်ငှက်များ ရောင်းဝယ်နေခြင်းကြောင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့် ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချေးငွေသတင်းပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ပေးနိုင်တော့မည်
ငွေစက္ကူအတုမှန်း မသိဘဲ သုံးမိသူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိရေး ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကို ရှင်းလင်းအောင် ပြင်ဆင်သင့်ဟု ဥပဒေပညာရှင်များ ဆို
ရွှေမြစန္ဒီမြို့သစ် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု
တပ်မတော် ထောက်ခံခြင်းနှင့် ပြင်ပ စွက်ဖက်လုပ်ဆောင်မှုများ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ဗန်းမောက်၌ ကျင်းပ